I-ENERMULSION - Ukuncishiswa kwe-NOx ngu-Ultrasonic Emulsation - Hielscher Ultrasound Technology
I-TecnoVeritas yinkampani ehola phambili kwezobuchwepheshe bokudoba olwandle. I-TecnoVeritas’ Inermulsion iyi-ultrasonic HFO-water emulsion system ehlanganiswa ngempumelelo ezitsheni zasolwandle ukunciphisa ukuphuma kwe-nitrous oxide (CHAx), carbon dioxide (CO2), i-carbon monoxide (CO) ne-particulate matter kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, ukusetshenziswa kwephethiloli kunganciphisa kuze kube ngu-5%. I-ENERMULSION yenza isitsha sakho sezilwandle sihlume futhi sikugcine imali!
Emulsions Emanzini Aphephile Amanzi
I-Enermulsion ikhiqiza esheshayo e-line esitebeleni amanzi-in-amafutha emulsion fuel ngokusebenzisa ultrasonic zayo innovative cavitation uhlelo lwe-homogenizing. Ngesikhathi uqinisekisa ukushisa okungcono izimo kanye ukusetshenziswa kwamafutha aphansi, ukukhishwa komoya okukhipha njenge-NOx, i-carbon carbon / soot nezinye izinto, kunciphise kakhulu. Uhlelo lokushisa kanye nezinto zokukhipha ziphinde zithole ukuhlanza (izibilini kanye nezokucubungula izilimo eziyizigaxa, izingxenye ze-turbine nezinjini) eziholela izindleko zokugcina ezansi.
Ukuqinisekiswa kunganikeza izinhlobo eziningi zokuphehla ngamanzi emulsions, okufaka amakhekhe okukhanya (LFO, IFO, MDO, noma GO), kanye namafutha aphezulu kagesi (HFO) ukuze kutholakale ukukhishwa kwamanzi kanye nokugcinwa kwamafutha.
Ukufakwa kwe-ENERMULSION akudingi ukuguqulwa kwezinjini futhi akukho ukuphazamiseka kokusebenza kwenjini. Ukuqinisekiswa kuyisimo uhlelo lwe-in-line, akukho amathangi engeziwe ayadingeka. Amandla ultrasonicators ezimbonini ezifana the I-UIP2000hdT yakhelwe umsebenzi onzima izicelo ku izindawo ezidinga futhi unikeze amabutho ekhanda elidingekayo futhi kalula ukucubungula imifudlana ye-viscosities ephezulu kanye namazinga aphezulu okugeleza. Uhlelo oluqinile lwe-Enermulsion ludinga ukugcinwa okuphansi kuphela futhi luphephile futhi lusebenza kalula.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-TecnoVeritas’ Uhlelo lwe-ENERMULSION, sicela uchofoze lapha ukuze uqhubeke ku-TecnoVeritas’ Ikhasi lasekhaya!